Ambuya Dorothy Masuka nemutori wenhau Ezra 'Tshisa' Sibanda.
Muimbi aive nemukurumbira pasi rose Dorothy Masuka uye akashaya nemusi weMugovera achitarisira kuradzikwa kumarinda eWest Park Cemetry muJohannesburg nemusi weSvondo.
Ambuya Masuka avo vainge vave nemakore makumi masere nematatu ekuberekwa vakashaika mushure mekurwara nechirwere chekuoma mutezo.
Mutauriri wemhuri yekwaMasuka VaMorris Roda vanoti vati kuchemrwa kumba kwavo kuMulbarton muJohannesburg uye vanhu vachanounganazve muNelson Mandela Theatre muJohannesburg nenguva dza 9 mangwanani vasati vaenda kunoradzikwa.
Ambuya Masuka ndivo vakanyora kambo Pata Pata kakapawo muchakabvu Miriam Makeba mbiri kakazoimbwawo namushakabvu Oliver Mtukudzi neAfro Turner.
Mushakabvu Hugh Maskela akaitawo mbiri nekamwe kambo kakanyorwa naAmai Masuka kanonzi Khawuleza ako kakaimbwawo naMakeba. Dzimwe nziyo dzavo dzakaita saKulala na Hamba Nontsokolo dzakaimbwa naMasekela, naThandiswa Mazwai.
Ambuya Masuku vakaberekerwa kuBulawayo baba vavo vari vekuZambia, Amai vavo vari vekuSouth Africa.
Pakuberekwa vainzi Masuku asi pakanganiswa kunyorwa pamadambarefu avo ekutanga vachibva vangotanga kudaidzwa nezita iri. Mufi akava mumwe wemadzimai ekutanga kuita mbiri yakanyanya muAfrica kumakore ekuma1950.
Muna 1961 vakaimba kambo Lumumba mushure mekuurayiwa kwaPatrice Lumumba wekuCongo zvakapa kuti vamanikidzwe kuenda muhupoteri kwemakore makumi matatu sezvo hurumende yehudzvanyiriri yakaedza kubvuta kambo aka.
Vaiimba nziyo dzekukurudzira varwi verusununguko muZimbabwe, Malawi, Tanzania, Uganda, South Africa neKenya. Vakambogara muhupoteri kuAmerica neBritain vachibatsirwa neANC vasati vanogara kuZambia.
Ambuya Masuka vakapinzwa muAfropop Hall of Fame muNew York muna 2002 uye vakapihwa mubairo wepamusoro weOrder of Ikhamanga in Silver nevaive mutungamiri weSouth Africa VaThabo Mbeki.
Muzvinafundo Moses Chikowero avo vakanyora bhuku rinonzi African Music, Power and Being, Colonial Zimbabwe vanoti Ambuya Masuka vakarwisa hurumende dzehudzvanyiriri kuburikidza nekuimba.
Hurukuro naMuzvinafundo Moses Chikowero